Kuunza Vana uye Kubatana pamwe chete | Apo vana varipo
Kubatana nevana | mhuri
Tora nguva uye uzviwanire sevanhu vaviri vatsva
Chengetedza zvido zvekushamwaridzana uye ushamwari!
Pakutanga iwe uchiri murudo, zvose zviri kufamba sezvazvingafanira kuva. Cinema usiku, kudya kwema candlelight uye Svondo mangwanani iwe unogona kurara. Saka kubatana kwakabatana, hapana chinomira munzira yekuronga mhuri.
Kuunza vana pamwe chete pamwe chete
Asi kupera kukuru kunosvika kumagumo: kwete zvisingamboiti ukama hunokundikana mugore rokutanga mushure mokunge vana vazvarwa. Vana vachidanidzira, kukakavadzana, kurara usiku, izvi zvose zvinowanzoita zvakawanda kumurume nomudzimai vechidiki pane kunze kwekufungidzira. Asi munhu wese akati nguva iyo vana vaduku ndeimwe yekanakisisa.
Kuenzanisa kubatana uye mhuri
Munhu wese anotanga kuve akafanirwa kushandiswa pakuita basa rake idzva
Mwana anoreva kutora mutoro. Haisi zvinhu zvemari chete zvinovhiringidza mhuri yechidiki. Uye nechechechewo inoshandura iwe pachako basa muhukama. Kamwe kamwe, iwe hausisiri shamwari, murume kana mudzimai, asi amai kana baba, uye iwe une mamwe mabasawo.
Kana mukadzi akagara pamba, murume iye zvino anofanira kutarisira mudzimai wake nechecheche. Varume vazhinji vanoisa ruzivo urwu pasi pekumanikidzwa nokuti nzvimbo yebasa haisi iyo inozviratidza nhasi sezvaisimbova. Mukadzi wacho, kune rumwe rutivi, anofanira kusarudza kana achizvipira zvachose kutarisira mwana wake kana kuti kudzokera kubasa mushure meimwe nguva yakawanda, uye kuisa mwana wacho mucheche kwenguva refu.
Kana iye akasarudza kuvapo nokuda kwevana vake, anopa chidimbu chechimiro chake chekare uye anotarisana nemamiriro ezvinhu matsva. Zvinhu zvose hazvisi nguva dzakanaka panguva ino, kunyange kana amai vechidiki vachifara mune basa ravo. Vana veusiku vachichema nekuda kwekuti kana mazino maduku ekutanga, kushungurudzika nemumwe wako, kusava nechokwadi, kana iwe ukaita zvinhu zvose zvakanaka, uyewo shanduko yehomoni inowanzopa nyika.
Upenyu hwezuva nezuva hwebaba vatsva hahushanduki zvakanyanya seyaamai. Zvisinei, paanodzoka kumusha, haawanzokwazwi nehana yakanaka "Shamwari shamwari, yaive sei zuva rako!", Asi zvichida inobva kumukadzi wake ane shungu pahurukuro, asingatauri, vana vakamanikidzwa mumaoko ake.
Nenzira yakawanda, mumaziso ake, mukadzi uyo aimbova nehanya naye iye zvinoita seakashanduka zvachose. Kazhinji varume vanotoita nehanya nevana. Mwana wacho kubva ipapo achauya kutanga - uye zvichadaro kusvikira vana vatiza.
Pakutanga vana vaduku vanababa vanofanira kufanana nayo. Pano zvinotora kushivirira kwakawanda, ushingi uye hutano hwakanaka hwekushivirira, kuitira kuti muchato usakundikana. Mhuri shoma shoma ine vana vanorara mushure memavhiki matatu!
Mushure mechinguva, mumwe kazhinji anowanzozviwana oga kana zvishoma mubasa rake idzva uye anobvuma kuti semurume nemudzimai, munhu anofanira kuzvidzikinura zvakare. Saka, vose vanaamai vaduku nebaba vanofanirwa kuzvibata nguva dzose-uye kubva pakutanga-pamwe chete. Zvechokwadi kune vanasekuru navanambuya vanotora basa rekubata kamwechete pamwedzi, zviri nani kana kaviri. Kana aya asingagari panzvimbo yepaiti, unogona kuteerera munharaunda yevanoziva. Zvechokwadi mumwe munhu anoziva mubati wekutendeseka asina kutengesa.
Kana mhuri dzechidiki dzinotsigirana mumwe nomumwe. Zvichida mumwe munhu kubva kumunharaunda anopawo kutarisira mwana. Tora chero rubatsiro pano! Kubatana kunobatsira kubva panguva iyi yakagoverwa munguva refu.
Muchibvumirano, munhu wose anofanira kuva nenguva yekuzvipira kwake, pasinei nevana vavo. Pano, avo vanobvumirana vanofanira kuuya pamwe chete, nokuti paunenge uchitevera zvido zvako, muviri unoderedza kushungurudzika uye unogona kubhadhara mabhatiri ako. Izvo zvinoshandawo kune denderedzwa yevamwe shamwari. Kazhinji ushamwari hwepanguva refu hunotambura kubva panguva yezvinetso zvevabereki, kunyanya kana shamwari dzichiri dzisina vana uye hadzigoni kunzwisisa kana munhu aneta kwazvo manheru kuti ataure kwenguva yakareba.
Vana uye kubatana
Uyewo pano: Purogiramu yakatarwa nguva. A: "Tinogona kusanganazve imwe nguva" haibatsiri munhu. Kunyanya musangano pamwe neshamwari uye kukura kwezvinhu zvinokuvaraidza kazhinji kazhinji zvishoma, pano iwe uchawana chikamu zvakare mukuzivikanwa kwake. Unyanzvi hukuru hwemhuri mhuri ndeyekudaro, kuwedzera kune hupenyu hwakakomba hwezuva nezuva, izvo zvekare zvakare zvine nguva isingakanganwiki yekupa zviwi kuumba nekudzorera mabheti ako pano.
Kuroora kurayira kunobatsira
Kana izvi zvose zvisingabatsiri kana pasina nguva yakakwana yakasara, zvingavawo zvine musoro kuwana rubatsiro kubva kune unyanzvi. Nyanzvi dzepfungwa dzinowanzopa kuroora mazano zvinokurumidza kuratidza chinokonzera, dambudziko guru. Ichokwadi kuti vakaroorana vanofanira kushanda pavari ivo pachavo asi kana ukama hwavo hwakakosha chimwe chinhu, havafaniri kuvanza uye kubvisa kubhenekera kwehupenyu hwezuva nezuva. Nokuti, hongu, haisi iyo yekupa mhosva yezvinetso, asi kukwanisa kwevabereki kubata nematambudziko.
Vabereki vanodawo zororo ... Ushamwari hwevana
Kuita uye kudya kunovaka muviri ushamwari
Anonyengedzwa - chii zvino? | ushamwari
Kushamwaridzana Kwoga - Kamwe chete kufare | ushamwari
Mazita emapumburu uye zvaanoreva; ushamwari
Nyaya inotaura nyaya dzepabonde Zano rekuita zvepabonde | Sexuality partnership
Age difference | Ushamwari pamwe nerudo
Kuita bonhora mumubatanidzwa | zvepabonde
Attachment anxiety | ushamwari
Ukama hwakanaka hwepabonde Kubuda kunze kubatana
Kudonha pamwe chete nemudzimai Ushamwari hwekutengesa
Iva mubereki - gara murume nemudzimai vane rudo ... ushamwari
Erotic poem | Rudo ruchibatana